चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात : दोषीलाई कारबाहीको कानुन छ, कार्यान्वयन भएन – Health Post Nepal
२०७७ जेठ १८ गते १५:०१
जेठ १४, नेपाल मेडिकल कलेज (जोरपाटी) मा ६४ वर्षीया महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु हुनपुग्यो। दमको रोग भएकी ती महिलामा शरीरमा अक्सिजनको मात्रामा कमी भएका कारण मृत्यु भयो। चिकित्सकले कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका गरेर मृतकको आफन्तसँग ट्राभल हिस्ट्री बुझ्न थाले।
त्यत्तिकैमा ‘बचाउन सकिनस्, र कोरोना लागेको भन्दै पन्छिन खोजिस्’ भनेर मृतकका छोराले डाक्टरमाथि मुक्का प्रहार गरे। अस्पतालमा दूरी कायम गर्नेका लागि स्टिल बार लगाइएको थियो। त्यही स्टिल बार उचालेर प्रहार गर्न थालेपछि डाक्टर ज्यान जोगाउन बाहिर भागे। बाहिर निस्कने क्रममा बिरामीको आफन्तबाट लात्तीसमेत खानुपरेको थियो। हातपात हुँदा त्यतिबेला सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणको उपस्थित थियो। तर, डाक्टरले लात्ती सहिरहे, सुरक्षाकर्मी मूकदर्शक भए।
चिकित्सकले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराए। तर, हालसम्म दोषीलाई कारबाही प्रक्रियामा ल्याइएको छैन।
जेठ १६, रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा पनि स्थानीयद्वारा तीनजना स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भयो। भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई छुटाउन जाँदा स्थानीयले हातहतियारसहित स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गरेका थिए।
रौतहटमा एउटा मदरसामा रहेको क्वारेन्टाइनमा रहेका ३६० जनाको स्वास्थ्य परीक्षणपछि खाना खाँदै गर्दा हतियार, खुर्सानीको धुलोसहित आएका स्थानीयहरूले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गरेका थिए।
इशानाथ नगरपालिका ७ मा रहेको अनावारुल हक मदरसा मोहिजंग जोहहामा सन्चालित क्वारेन्टाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमाथि कुटपिट भएकोे हो। तनाव व्यवस्थापन गर्नका लागि सुरक्षाकर्मीले १५ राउन्डभन्दा बढी हवाई फायर गरेको थियो।
जेठ १३, गढीमाई नगरका गम्हरिया स्वास्थ्यचौकीमा सन्चालित क्वारेन्टाइन सेन्टरका ड्युटीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि पनि हातपात भयो। क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसलाई छुटाउन जाँदा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएको थियो। हाराहारी ८० संख्यामा आएका सोही नगरपालिका शेख सहाबुद्दिन भनिने मन्ना कादिन अन्सारीको नेतृत्वमा आएको टोलीले दुव्र्यवहारसहित आक्रमण गरेका थिए। एचए धर्मेन्द्र सहनी, अनमी रिंकी ठाकुर र कास असनी कुमारमाथि आक्रमण भएको थियो।
स्वास्थ्यकर्मीले दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरेका छन्। तर, घटना घटेको एक साता बितिसक्दा पनि प्रहरी प्रशासनले दोषीलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन।
यी कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि घटेका केही घटनामात्र हुन्। यस्ता दर्जनौं घटना घटिरहेका छन्।
महामारीका बेला आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात हुनु दुःखद भएको नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. बद्री रिजाल बताउँछन्।
गत चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका क्रममा संलग्न चिकित्सक, नर्स र प्राविधिक स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो। उनीहरूमाथि भएको आक्रमणको प्रकृति हेरी कारबाही गरिने भनिएको छ। तर, पटक–पटक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुव्र्यवहारको घटना भने बढ्दै गएको छ।
उनका अनुसार सरकारले दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्नेमा अनेक बहानामा ढिलाइ गरिरहेको छ।
‘चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी नै सुरक्षित भएनन् भने कसरी सेवा दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सुरक्षाव्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेता पनि कार्यावन्यन भएको देखिँदैन।’
राज्यले दोषीलाई तत्काल कारबाही नगरे आफूहरू आन्दोलनको बाटोमा हिँड्न बाध्य हुने उनी बताउँछन्। ‘राज्यले कानुनको पालना गरी स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ,’ डा. रिजालले भने, ‘राज्यले कारबाही गर्दैन भने त्यसको विकल्प हामीले सोचेका छौं।’
स्वास्थ्यकर्मीमाथि दिनानु दिन आक्रणण भइरहँदा सरकार मूकदर्शक भएर बसेको आरोप स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरेले लगाए। ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई एकातर्फ कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ, अर्कोतर्फ भौतिक आक्रमण भएको छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘घटना भएको एक साता भइसक्दा पनि सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन।’
सरकारले क्वारेन्टाइनलाई गाइडलाइनअनुसार व्यवस्थापन नसक्दाको दोष आमस्वास्थ्यकर्मीले भोग्नुपरेको उनको बुझाइ छ।